စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 1/08/2014 11:29:00 AM
ဆရာတော်ဦးဇောတိက ရဲ့ တယောက်တည်း ပျော်အောင်နေဆိုတဲ့ စာအုပ်ကလေးကို ဖတ်စေချင်တယ်။ မိမိရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုဟာ သူတပါးပေါ် မူတည်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ အပြည့်အ၀ ပျော်ရွှင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တရားသိပြီး စာအဖြစ်ရေးတာမျိုးဆို ဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ စာပါ။ စာရေးခြင်းဆိုတာလည်း နှလုံးသည်းပွတ်က စီးကျလာတာမို့ စာရေးသူကို သံယောဇဉ်နှောင်ဖွဲ့ခြင်း အတွေးတွေကနေ ဝေးစေလိုရုံ သက်သက်
8/1/14 2:12 PM
8/1/14 3:40 PM
Most of your articles that hit my heart and appreciate your all effort.
9/1/14 8:42 PM
Dear Esther, sis Thadar and Anonymous,
Thanks so much for ur kind comments. love u guys :)
10/1/14 7:46 AM
သံယောဇဉ် အ နှောင် အဖွဲ့တွေက နေ ဝေးဖို့ ဆို တာထက် နေသားကျအောင် နေ ဖို့က ပိုပြီးလက်တွေ့ဆန်မှာပါ .....တကယ်တမ်းတော့ အထီးကျန်တယ်ဆို တာ သိပ်မရှိပါဘူး ..အလွမ်းတွေပဲရှိနေ တယ်ဆို ရင်တောင် အဲဒါတွေက ဘော်ဒါတွေပေါ့
29/1/14 12:44 PM